बचत – nepa.coop.np
फोन नं ०२५-५८५८१२
फ्याक्स नं: ०२५-५८७२३८ दर्ता नं : ३/१/७ (१८९) ०५७ / ०५८
नेपा: बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
इटहरी,धरान रोड सुनसरी
ऋण लगानी :-
सदस्यता वा सेयर आवेदन फारम
KYC अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धि
(१) अनिवार्य बचत :—
यस संस्थाको शेयर सदस्य हुने कुनै पनि ब्यक्तिले न्युनतम मासिक रु. ३००।— वा दैनिक न्यूनतम रु. १०।— नियमित बुझाउउनु पर्नेछ । यस खातामा जम्मा भएको रकम न्यूनतम रु ५०० मौज्दात राखि सदस्य बनेको मितिले २/२ (दुईं) बर्ष पुरा भएपछि मात्र निकाल्न सकिनेछ । यस खातामा बार्षिक ८.५५% का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ ।
(२) ऐच्छिक बचत :-
यस खातामा सदस्यहरुले दैनिक वा आफुले चाहेको बखत रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् र आवश्यकता परेको बेला रकम झिक्न पनि सकिनेछ । यस खातामा बार्षिक ६.५ का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ । यो खातामा रु. ५००।— न्यूनतम मौज्दात हुनु पर्नेछ ।
(३) आवधिक बचत :-
यस खातामा न्यूनतम रु.१०,०००।— र सोे भन्दा माथि निश्चित अवधिका लागि जम्मा गर्न सकिने छ ।
यस खातामा निम्नानुसार अवधिमा निम्नानुसार ब्याज दर प्रदान गरिने छ ।
(I) ६/६ महिनामा ब्याज भुक्तानी लिएमा ।
(क) १ बर्षे आवधिक बचतमा ९.५५% (ख) २ बर्षे आवधिक बचतमा १०.५५% (ग) ३ बर्षे आवधिक बचतमा ११.५५%
(II) अवधि समाप्त भए पछि एक मुष्ठ ब्याज भुक्तानी लिएमा ।
(क) १ बर्षे आवधिक बचतमा १०५ (ख) २ बर्षे आवधिक बचतमा ११५ (ग) ३ बर्षे आवधिक बचतमा १२५।
(४) बाल बचत :-
यस संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरुका छोरा/छोरी जो १६ बर्ष पुगेका छैनन् तिनलाई सानै उमेरदेखि बचत गर्ने बानि बसाली तिनीहरुको भविष्य सुरक्षित गर्न तथा पठन पाठनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले यो खाताको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ९५ का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ ।
(५) गृहिणी बचत :-
यो बचत महिलाहरुको विशेष बचत कार्यक्रम अन्तरगत यस खातामा दैनिक रु. १०।— वा सो भन्दा माथि जति सुकै रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । यस खातामा ९५ का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ ।
(६) पेन्सन बचत योजना :-
यो योजना तपसिल बमोजिम ३ (तीन) किसिमको (१०,१५ र २० बर्षे) भएको हु“दा आफुले चाहेको योजनामा सकृयताका साथ सहभागी हुन सकिनेछ ।
क) १० बर्षे पेन्सन बचत योजना
१) यस योजनाको अवधि १० वर्षको हुनेछ ।
२) रु.१,०००।— (रु.एक हजार) मात्रले भाग जाने अंक वरावरको रकम प्रत्येक महिना कोे मसान्त भीत्र जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
३) अवधि पुरा भए पछि “वा वरावरको रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।
४) अवधि समाप्त भएको महिना पछिको दोस्रो महिना देखि प्रत्येक महिना रु. १,०००।— (एक हजार) मात्र पेन्सन भुक्तानी गरिनेछ ।
५) यस योजनामा सरिक हुने लाई रु. १,००,०००।— (एक लाख) मात्र वरावरको दुर्घटना वीमा गरिनेछ ।
६) अवधि समाप्त भएपछि वचत कर्ताको मृत्यू भएमा एकमुष्ठ रु. १,००,०००।– (रु. एक लाख मात्र) मृत्यु राहत वापत सम्वन्धित हकवालालाई राहत उपलव्ध गराईनेछ
ख) १५ वर्षे पेन्सन वचत योजना
१) यस योजनाको अवधि १५ वर्षको हुनेछ ।
२) रु ३००। (तिन सय) मात्रले भाग जाने अंक वरावरको रकम प्रत्येक महिना को मसान्त भीत्र जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
३) अवधि पुरा भए पछि सा“वा वरावरको रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ
४) अवधि समाप्त भएको महिना पछि प्रत्येक महिना (मासिक रु. ३००।— जम्मा गर्नेले) रु. ६००।— (छ सय) मात्र पेन्सन पाउनेछ ।
५) यस योजनामा सरिक हुने लाई रु.१०००००।— (एक लाख) वरावरको दुर्घटना वीमा गरिनेछ ।
६) अवधि समाप्त भएपछि वचत कर्ताको मृत्यु भएमा एकमष्ठ (मासिक रु. ३००।— जम्मा गर्नेले) रु. ४५,०००।— (पैंतालिस हजार) मात्र मृत्यु राहत रकम सम्वन्धित हकवालालाई उपलव्ध गराईनेछ ।
ग) २० वर्षे पेन्सन वचत योजना
१) यस योजनाको अवधि २० वर्षको हुनेछ ।
२) रु.३००। (तिन सय) मात्रले भाग जाने अंक वरावरको रकम प्रत्येक महिना कोे मसान्त भीत्र जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
३) अवधि पुरा भए पछि स“ांवा वरावरको रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ
४) अवधि समाप्त भएको महिना पछि प्रत्येक महिना (मासिक रु. ३००।— जम्मा गर्नेले) रु.१,०००।— (एक हजार) मात्र पेन्सन पाउनेछ ।
६) अवधि समाप्त भएपछि वचत कर्ताको मृत्यू भएमा (मासिक रु. ३००।— जम्मा गर्नेले) एकमुष्ठ रु. ६०,०००।–(साठी हजार) मात्र मृत्यु राहत वापत सम्वन्धित हकवालालाई राहत उपलव्ध गराईनेछ
(७) खुत्रुके बचत :-
यस खातामा दैनिक रु. १०।— वा सो भन्दा माथि जम्मा गर्न सकिनेछ । यस खातामा निम्नानुसारको अवधिमा निम्नानुसार बार्षिक ब्याज दिइने छ । यस खाताको अवधि पुरा भएपछि एकमुष्ठ रकम मिmक्न सकिनेछ ।
(क) ६ महिनेमा ४५,(ख)१२ महिने मा ६५,(ग)१८ महिनेमा ६.५५ (घ) ५ बर्षेमा १०५
(८) नेपाः विशेष बचत:-
यस बचत खातामा न्युनतम रु. १०,०००। रहनुपर्नेछ । यस बचत खातामा जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिनेछ । यस बचत खातामा दैनिक ब्यालेन्सका आधारमा ६÷६ महिनामा (पौष मसान्त र असार मसान्तमा) ब्याज गणना गरि दिइनेछ । यस बचत खातामा निम्नानुसार ब्याज दर प्रदान गरिने छ।
(क) बिषेश ऐच्छिक बचत “क” ः न्युनतम् रु.१००००।— मा ७५ (ख) बिषेश ऐच्छिक बचत “ख” न्यूनतम रु. १०००००।— मा ८५
(९) जेष्ठ जागरिक बचत :-
यस खातामा शेयर सदस्य वा शेयर सदस्यको परिवारका ७० बर्ष पार गर्ने जेष्ठ नागरिकहरुले न्यूनतम मासिक रु १०० मा नघटाई सो भन्दा माथि जतिसूकै भए पनि जम्मा गर्न सकिनेछ । यस खातामा ९५ का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ । दुई बर्षपछि खातामा जम्मा भएको रकम मध्ये रु ५०० राखि बांकी रकम निकाल्न सकिनेछ ।
(१०) शैक्षिक बचत :-
यो खातामा शेयर सदस्य वा निजको सन्ततीले न्यूनतम रु १०० मा नघटाई सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि जम्मा गर्न सकिनेछ । खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धीत बचतकर्ताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने समयमा वा कम्तिमा ५ ( पांच) बर्ष पछि न्यूनतम मौज्दात रु ५०० खातामा राखि बांकी रकम एकमूष्ठ निकाल्न सकिनेछ । यस खातामा ९५ का दरले ब्याज प्रदान गरिने छ ।
Itahari- 1 Sunsari, Nepal
Phone: +977 25 585812
Copyright © 2022 nepa.coop.np
Designed By: Sulav Host